Shaqooyinka Beeraha | USAHello | USAHello
Baro beeraha iyo kala duwan ee noocyada kala duwan ee shaqooyinka beeraha. Read ku saabsan waddooyinka kala duwan mustaqbalkiisa in aad qaadi karto beeraha. Raadi wax ku saabsan tababarka aad u baahan tahay iyo meesha aad u bilaabayso raadinta shaqooyinka.
Nuqul ka mid ah image of Fish iyo Duur-joogta Service Maraykanka
Shaqooyinka Beeraha waxaa ka mid ah nooc kasta oo shaqo beero ah. Beerida dalagyada beeraha iyo shaqaalaha waxaa kor u xayawaanka iyo wax soo saarka beeraha u jeesanaynaa cuntada. beeraha American ku xidhan tahay soo galootiga. Waxay ka caawisaa qaxootiga iyo muhaajiriinta ee wax soo saarka ee cunto kasta qaranka.
Waxaa laga yaabaa in aad leedahay asal ah oo duurka ku beeraha oo aad rabto in ay ka shaqeeyaan beeraha ah. Waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad tababar xirfad beeraha. Read ku saabsan noocyada kala duwan ee shaqooyinka beeraha iyo sida ay u bilaabaan.
beeraha Small – Waxay soo saartaa beeraha yar cuntooyin badan oo organic ama khaas ah. Bilawga in ay beer gaar ah ee Maraykanka u baahan yahay shaqo badan iyo maal-gashiga.
Farmhand – shaqaalaha Farm on beeraha waaweyn xoolo ama dalagga shuqulladoodii.
mashiinka lagu cabayn Hilibka – Ka shaqeynta on gowraco xoolaha iyo xirxirida hilib jawi warshad-sida a. Si ay u bixiyaan caymiska caafimaadka iyo shaqooyinka kale ee beeraha. Dad badan oo waxaa loo isticmaalaa in la abaabulo dhirta hilib qaxootiga.
shaqaale xilliyeed – inta badan shaqaalaha xilliyeed waddanka u soo guurey u safrin Mareykanka ka dib markii xilli ciyaareed dalagga goosashada Alzraah.ihsdon dhirta, haramaha, biyaha, baakadaha iyo loading xilli dalagga this. Inta badan oo ka mid ah shaqaalaha xilliyeed (Waxaa si sharci ah ku xidhay) Iyo xaaladaha shaqada xun.
mashaariicda Inner-magaalada – Waxaa jira fursado badan oo iskaa wax u qabso iyo qaar ka mid ah jagooyinka mushaarka badan ee beeraha magaalada iyo beeraha bulshada.
ka shaqeeya mishiinada beeraha – Wadayaasha qalab badan oo loo baahan yahay in beerta tababarka dheeraad ah iyo shahaado, laakiin waxay u baahan tahay iyo inta badan u oofin ka khayr badan shaqaalaha kale ee beeraha.
Dowladda Isbatooraha – Baadhayaashu hubiyo in agronomists in dalagga cuntada iyo xoolaha oo si haboon loo sara kiciyey oo raaca xeerarka caafimaadka, nabadgelyada iyo deegaanka.
Tababaraha Farm ama horjoogaha beerta – Kormeera maamulayaasha shaqaalaha beeraha, shaqaalaha gaar ahaan soo galootiga ah kuwaas oo u safri ka beer in shaqaalaha beeraha.
Ganacsiga beeraha – Shaqooyinka dhinaca ganacsiga beeraha waxa ka mid ah, oo ay ku jiraan iibka iyo warshadaha kale taageeraya. hawlaha waxay bixiyaan jagooyinka maamulka more.
Seynisyahanno – Beeraha Sciences ka mid Science Ciidda iyo Plant Hidaha.
Ma shaqooyinka beeraha ku haboon ii?
Beeraha waa shaqo adag jirka. Waa in shaqaalaha beeraha iyo dadka xoolo awood shaqeeyaan. Shaqooyin badan beeraha ayaa sidoo kale loo isticmaalaa mishiinnada, oo sidaas bayna tahay shaqo fiican qof si fiican u shaqeeya mishiinada. Haddii aad rabto in aad dibadda u shaqeeyaan, hawlaha joog beeraha. Laakiin shaqeeyaan beeraha halis, oo waa inaad ka taxadartaa ku saabsan mishiinada, kiimikooyinka iyo xoolaha. Haddii aad awoodo inaad awoodi waajibaadkaaga, Tababaraha beeraha ama kormeeraha tan waxaa laga yaabaa inaad ku haboon kuu. Hadal laba luuqadood waa dheelitirka weyn oo ah agaasimaha shaqaalaha beeraha.
shaqooyinka beeraha waa qeyb weyn oo dhaqaalaha ee California, Texas iyo gobolada qaar ee badhtamaha galbeed iyo koonfur-. Caanaha iyo midhaha warshadaha, khudaar iyo hilib had iyo jeer u baahan tahay in shaqaalaha beeraha. Iyagu ma ay inta badan dalbanayaan khibrad ama waxbarashada dugsiga sare. Tababaraha beeralay ama beerta Ptdrebk doonaa. Laakiin shaqooyin kuwanu ma mushahar fiican. Sida laga soo xigtay US Department of Agriculture, in ka badan kala bar dhamaan shaqaalaha beeraha kasta oo aan sharciga lahayn ma ay qabaan waraaqaha sharciga.
Waxaa laga yaabaa in u baahan tahay waxbarasho kale xirfadaha beeraha iyo tababarka qaar ka mid ah. shaqooyinka dawladda u baahan, sida kormeeraha beeraha Hel dhalashada Mareykanka casharka Bilaashka ah ee imtixaanka jinsiyadda American online
Raadi safafka beeraha kuu dhow
Kuleejooyinka bulshada meelaha ay u badan oo casharo beer beeraha. Oo bixisa degrees associate muddo laba sano ah. Waxaad ka heli kartaa shahaado associate cilmiga xoolaha, cilmiga beeraha ama biology. Oo uu ka shaqeeyo ganacsiga beeraha, ama haddii aad rabto si ay u bilaabaan ganacsi, waxaad sidoo kale u baahan xirfadaha ganacsiga. Waxaa jira koorsooyin badan oo ganacsi ee kulliyadaha bulshada. Raadi kulliyadda beesha kuu dhow
koorsooyinka Online barnaamijka beeraha yaryar ee jaamacadda Cornell Daawo video clips ka ammaanka Xarumaha Badbaadada Beeraha iyo Caafimaadka United States
Barnaamijyada Beeraha cusub Americans
qaxootiga iyo doolka badan ayaa u yimid inuu America aqoonta beeraha. Ameerika oo dhan, waxaad ka heli kartaa barnaamijyo taageera ama qaxootiga tababar ama shaqo siiyaan beeralayda. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah:
Georgia: beeralayda dunida ee
Hawaii: Beeraha Konya Kobcinta
Illinois: barnaamijka tababarka beeraha Global ee qaxootiga
Maine: Project New Beeraha Sustainable American (NASAP)
New York: Cyrkios Beeraha Partnership for Refugees
Massachusetts: mashruuc beeraha cusub inay soo galaan waarta
Missouri: Machadka Caalamiga ah ee Global iyo beeraha □
Tennessee: isla baxaan
Vermont: Iyo beeraha □ New Americans for New
Daawo barnaamijka video a beeritaanka qaxootiga ee Vermont
Jeclaan lahayd inaad Noqo muwaadin?
waa Waxaad u baahan tahay GED?
Isticmaal Xarumaha Shaqada: xarumaha shaqada Dawladda oo lacag la'aan ah. Bixiyaan talo iyo sii liiska shaqooyinka deegaanka. Waxay ka caawinaya in taariikh nololeedka iyo hab-dhiska shaqada. Tababarka qaadan kartaa in aad ka shaqayso iyo waxbarashada. Raadi Center ee ugu dhow shaqada aad ka
Search Online: Aghres Waa goobta loogu talagalay qorista shaqooyinka beeraha
Waraysi Maurice Ajabulo, milkiilaha of Company adduunka ee dalagyada New Jersey Farm
In 2002 , Maurice Gpoulo u guuray koonfurta New Jersey qaxooti ka Liberia. Maanta, waxaana uu sameynayaa waxa uu jecel yahay – dalagyada khudradda jecel beerashada ayaa ka hooyo.
beeralayda Business wada dhiso ganacsi
khayraadka Work USAHello